Imisebenzi Yokuthengisa Yekhaya Eyodwa Eyakhelwe Ukwenza Impahla Yakho Imile Ngaphandle
UKUMAKetha KWETHU NGOKUQHELEKILE KUZOKWENZA IKHAYA LAKHO LIME PHANSI! UMA UNGU-A IKHAYA ELIKHULU, CABANGA NGENA LUCKY!
Sebenzisa okuhlukile kwempahla yakho ukuheha umthengi. Izinsizakalo zethu ezihlukile zokumaketha ekhaya zenzelwe ukwenza impahla yakho ivelele esixukwini futhi ikwenze uqaphele ... futhi ikuthengise!
Ngiye ngakhela iphakheji yamasevisi okuthengisa asekhaya ahlukile ukuze ngisakaze izwi futhi ngithole indawo yakho iqaphele futhi ithengiswe!
Sakha “Indaba Yakho”
Ukuthenga ikhaya kuyisinqumo esithinta imizwa futhi uqobo. Sizobhala “Indaba Yesakhiwo” sakho ukunxenxa imizwa yomthengi.
Abathengi bazokwazi “ukuzizwa” ukuthi kunjani ukuhlala endlini yakho nasezindaweni zakho. "Zizothuthwa ngokomzwelo" ngempahla yakho. Indaba Yendawo yakho izohluka njengempahla yakho.
“Ukukhangisa Okusezingeni Lomhlaba Ezincwadini Eziku-inthanethi”
Ukukhangisa Okusezingeni Lomhlaba - Indawo yakho izoboniswa kunethiwekhi yethu yokukhangisa kubathengi abacebile kakhulu emhlabeni. Uzoba nesikhangiso esigcwele ikhasi ezinhlelweni zedijithali ze-Wall Street Journal, Robb Report, the duPont Registry, Mansion Global, kanye ne-The New York Times**, njll. Isikhangiso sakho esinekhasi eligcwele sizodlala ngesikhathi esisodwa kulokhu kushicilelwa kuso sonke isikhathi sokufakwa kuhlu kwakho nathi. *
“Veza Indawo Yakho Kubathengi Bakwamanye Amazwe”
Sibheka ukuthenga kwamanye amazwe njengento ebalulekile. Umkhankaso wakho wokumaketha wasekhaya oyingqayizivele uzofinyelela izethameli zomhlaba wonke ngokufakwa kwezikhangiso zamazwe ngamazwe ezingaphezu kuka-120 e-China, Saudi Arabia, UAE, Russia, Germany, nokuningi. Funda kabanzi…
Beka Ikhaya Lakho “Phambi Kwabathengi Bekhaya Abahlukile” kuwebhusayithi yethu enhle
Yembula izici ezinhle kakhulu nezici eziyingqayizivele zempahla yakho engavamile. Ukulandela kwethu komhlaba wonke kwabathengi bekhaya abahlukile kulinde ukubona ikhaya lakho.
I-Special Find yakho izobekwa esigabeni samakhaya ohlobo olufanayo okwenza kube lula ukuthi abathengi bathole.
Ividiyo ye-YouTube Yezindlu Eziyingqayizivele Ezithengiswayo
Sizodala ividiyo yangokwezifiso futhi siyibeke kweyethu Amakhaya Ayingqayizivele Athengiswayo - Isiteshi se-YouTube!
“Umkhankaso Wezindaba Zabaningi”
Beka impahla yakho ngenkuthalo phambi kwabazingeli bezindlu ezingosini zokuxhumana ezihlanganisa i-Facebook, i-LinkedIn, njll.
Xhumana no-Brenda mayelana Nomkhankaso wethu Wokuthengisa Ogcwele oboniswe ngenhla!
UBrenda Thompson, isazi seMakethe yeMakethe Eyodwa
Yonke indlu engake ngaba nayo ibingafani nenye, kusukela esangweni lamatshe eMfuleni i-Hudson e I-New York ekhaya lokuthunyelwe nogongolo ngamabhodlela anemibala ashumekwe ezindongeni eNyakatho Carolina. Okuhlangenwe nakho kwami ​​siqu njengomthengi futhi lapho njengomthengisi kutshala umqondo oholela ekuvulweni kwe-Special “Finds…” ngo-1995.
Njengawe, nginezinto eziningi ezihlukile. Lapho sengikulungele ukuwathengisa, ngathola ukuthi amafemu wendabuko wezindlu nabathengisi bawo babengenawo amakhono ayisisekelo okukhangisa. Babengenalo ulwazi lwe indlela yokuthengisa ikhaya eliyingqayizivele noma ukuthi ungayithola kanjani impahla ehlukile. Ngakho-ke, ngathatha iminyaka engangineminyaka yobuchwepheshe bokukhangisa ezuzwe njengoMqondisi Wokukhangisa weNew York Stock Exchange, ihlangene nalena ilayisense yezindlu zangempela ukugcwalisa igebe elidinga kakhulu embonini yendawo yokuhlala, futhi i-voila! Okukhethekile "Ithola ..." yazalwa!
Ngingathanda ukukusiza uthengise impahla yakho eyingqayizivele. Unengcweti ekhethekile ethi “Thola…” futhi kudingeka umkhankaso wokumaketha ukuze ithengiswe. Kuthatha ubuhlakani beqiniso nokuvezwa okubanzi ukuthengisa indlu eyingqayizivele. I-Special “Finds…” yinkampani edayisa izindlu, kodwa ngaphezu kwalokho, singabakhangisi abangochwepheshe - sidlulela ngalé kokumane nje sibeke isikhangiso kwi-MLS yendawo.
Ukuthengisa ikhaya lakho eliyingqayizivele olwandle lwezindlu ze-cookie-cutter kuyindlela eqinisekile yokungaqapheli. Ukulindela abathengi ukuba babone ikhaya lakho eliyingqayizivele usebenzisa izindlela zendabuko kufana nokucela ukuba baqaphele inaliti esitokisini. Kuthatha indlela ekhethekile yokudayisa ikhaya lakho elikhethekile nokuheha umthengi efuna impahla ehlukile njengeyakho. Izinsizakalo zethu zokuthengisa ekhaya ezihlukile zingakusiza ukukhangisa impahla yakho ukuheha abathengi abazimisele ukukhokha intengo yakho.
Sakha imikhankaso yokukhangisa ngazinye yohlu lwethu lwezimpahla olwehlukile. Umkhankaso wakho uzobandakanya izigaba eziningi. Okokuqala, sikhomba umthengi onamandla kakhulu, bese sakha igama lesakhiwo esiqondiswe kulowo mthengi, sakha “indaba yempahla” ephoqelela ukuheha umthengi bese ukukhangisa impahla yakho kuzwelonke nasemhlabeni jikelele.
"Indaba yempahla" ingenye yezindlela zethu zokuhweba. Iphumelela kabanzi. Indaba yakho eyakhiwe yangokwezifiso izoletha impilo yakho eyingqayizivele. Abathengi bazokwazi "ukuzwa" ukuthi kunjani ukuhlala ekhaya lakho nasemagcekeni akho. Bazothuthwa ngokomzwelo ngempahla yakho kusuka noma ikuphi.
Sibe sesikhangisa impahla yakho kuyo yonke inethiwekhi yethu - ngokuqhubekayo eNew York Times, eWall Street Journal, eRobb Report, eDupont Registry, Mansion Global, International Herald nakwamanye amawebhusayithi edijithali angaphezu kwama-120.
Kwa-Special "Uthola ...", singabachwepheshe bokumaketha, bese kuba yi-Realtors®. Sigxila ngokuphelele ekukhangisweni kwezindlu eziyingqayizivele. Siyinkampani yezikhangiso yamakhaya angajwayelekile. Masikusize uthengise ikhaya lakho eliyingqayizivele.
Engeza impahla yakho ku-SpecialFinds.com
Ngu-$ 40.00 kuphela ngenyanga!
Bhala uhlu lwami
Ngena Ngokuthinta Nathi Ukuze Uqale
Ifomu lokuxhumana e-Easy Easy